Puntland oo wadda qorshe ay Siishalis ugala soo wareegayso burcad-badeed ku xiran. – Radio Daljir
Puntland oo wadda qorshe ay Siishalis ugala soo wareegayso burcad-badeed ku xiran.
Febraayo 13, 2013 1:17 g 0
Garowe, Feb 13 ? Maamulka Puntland ayaa ku hawlan qorshe uu ku damacsan in uu kula soo wareego burcad-badeed Soomaali ah oo ku xir-xiran xabsi ku yaalla jasiiradda Siishalis, kuwaasi oo ay maxkamadi xukuntay.
Qorshahaan oo ah wajigii labaad ee Puntland maxaabiis ugala wareegayso Siishalis, ayay Puntland ku damacsan tahay in la soo wareegto 25 maxaabiis burcad-badeed Soomaaliyeed, kuwaasi oo qayb ka ah 86 maxbuus oo ku xiran jasiiradda Siishalis, loona haysto galidda falal burcad-badeednimo.
Hirgalinta tallaabadaan iyo la soo wareegidda maxaabiista darteed, waxaa jasiiradda Siishalis u tagay wafti Puntland oo uu hoggaaminayo agaasimaha waaxda la dagaalanka burcad-badeedda ee Puntland Cabdirisaaq Maxamed Dirir ?Ducaysne?
Agaasimuhu, waxaa uu idaacadda VOA-da u sheegay barnaamijkaani in uu qayb ka yahay heshiis ay horay u galeen Puntland iyo Siishalis, kaasoo ogalaanayey marka la xukumo burcad-badeedda Soomaalida ah ee lagu hayo Jasiiraddaasi in lagu soo wareejiyo Puntland si xabsiyadeeda loogu hayo.
Ducaysane, waxaa uu sheegay qorshuhu in uu ahaa xilli hore in la hirgaliyo la soo wareegidda maxabiista, hase ahaatee la sugayey dib-u-habayn lagu samaynayey xabsiyada Puntland, taasoo ahayd dalab ka yimid QM oo doonaysay xabsiyada Puntland in laga dhigo kuwo nolosha caadiga ahi ka hirgali karto, lana sameeyey haatan middaas.
Maxaabiista haatan Puntland doonayso in ay la soo wareegto oo lagu xiri doono xabsiga magaalada Bossaso sida heshiishku yahay, ayaa ku biiri doona 259 maxbuus oo loo haysto burcad-badeedno kuwaasi oo ku jiran xabsiyada Puntland.
M/weynaha Soomaaliya oo maanta xafiiska ku qaabay ergayga AU ee Soomaaliya.